Mbido AKOTKỌ AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKW FOKWỌ AKW FOKWỌ Ndị egwuregwu bọọlụ Portuguese Nuno Tavares Childhood Akụkọ gbakwunyere Eziokwu Untold Biography
Anyị Nuno Tavares Biography na-egosi Eziokwu banyere akụkọ nwata ya, ndụ mbụ, nne na nna (Maria Amélia), Ezinụlọ, Nwanna (Edson Tavares).
Nke ka nke, enyi nwanyị Nuno, ụdị ndụ, ndụ onwe onye na uru net, wdg.
Na nkenke, akụkọ a nwere akụkọ zuru oke nke a Onye na-egwu egwú onye mechara bụrụ onye Onye nyochaa – ma ka na-edebe ya Music ntụrụndụ.
Lifebogger na-amalite Akụkọ ya site n'oge ọ bụ nwata (na Lisbon) ruo mgbe ọ nwetara ihe ịga nke ọma na football.
Iji kpalie agụụ ịgụ akụkọ ọdịbendị gị na ọdịdị nke Nuno Tavares 'Biography, anyị lere ya anya dị ka ihe kwesịrị ekwesị igosi gị nke ya. Ndụ egwu mbụ na Osisi Ịga nke Ọma.
Lee, usoro ndụ Mr Handsome.
Nuno Tavares Biography - Site na mbido ruo mgbe ọ ghọrọ onye ama ama.
Ee, onye ọ bụla na-ahụ n'anya otú ọ na-enye ọtụtụ ihe omimi n'akụkụ - na-emepụta ọnọdụ ihe ize ndụ mgbe nile maka nchebe ndị na-emegide.
dị nnọọ ka Reece James na Trent Alexander Arnold, ịgafe ya bụ otu n'ime ngwa ọgụ ya kachasị ukwuu.
Agbanyeghị, ọ nwere ike ị gaghị amasị ụzọ o si eji nkịta ya egwu egwu - Hụ vidiyo HERE !!
N'agbanyeghị ọtụtụ nkwanye ugwu bọọlụ gbara aha ya gburugburu, anyị na-aghọta - na ọ bụ naanị mmadụ ole na ole agụla nkenke nke Nuno Tavares 'Biography.
N'ihi nke a, Lifebogger abịawo na ọrụ gị. Ugbu a, n'enweghị ihe ọ bụla ọzọ, ka anyị malite.
Akụkọ Nuno Tavares nwata:
Maka ndị na-amalite akụkọ ndụ, ọ na-ebu aha - Lode Runner, na aha zuru ezu - Nuno Albertino Varela Tavares.
A mụrụ onye egwuregwu Portuguese n'ụbọchị 26th nke Jenụwarị 2000, nye nne ya, Maria Amélia, na obodo Lisbon, Portugal.
Nuno nọrọ oge ndụ ya na nwanne ya nwoke nke okenye, Edson Tavares. Ha abụọ tolitere na Bairro dos Navegadores, nke dị na Talaíde, ọmarịcha obodo Portuguese na mpụga Lisbon.
Nne na nna Nuno Tavares zụlitere ya na Obodo a.
Mgbe ọ bụ nwata, Nuno na -enwekarị ihe na ndị kacha mkpa na ndụ ya. N'ihe gbasara ndị mmadụ, ịhụnanya na -adịghị agwụ agwụ maka nne ya (Maria Amélia) na -ebute ụzọ.
Ihe na -esote ịhụnanya maka nne ya abụghị ihe ọzọ karịa mgbakwunye ya na egwu. Biko mara: Enweghị bọọlụ na foto a - n'oge a.
N'ezie, ọ nweghị ihe ọ bụla (ma e wezụga mama ya) nke nwere ike ịkekọrịta uche nwata nwoke ahụ na cello. Foto dị n'okpuru, Cello bụ ngwa egwu nke Nuno ji nnukwu ikike egwuri egwu.
Echegbula, anyị ga -agwa gị karịa maka akụkọ egwu ya dị ịtụnanya yana otu o si bụrụ onye egwuregwu.
Ị maara?… Ịhụnanya mbụ nke Nuno Tavares bụ Cello na NOT football.
Nzụlite ezinụlọ Nuno Tavares:
N'ịgbaso nyocha siri ike, anyị hụrụ - na okomoko agbabeghị n'oge mmalite ya, dịka ọtụtụ ezinụlọ nọ na Lisbon.
N'okwu dị mfe, nne na nna Nuno Taveres anaghị arụ ụlọ bara ọgaranya - kama, nke na -anọchite anya ụlọ akwụkwọ etiti.
Otu ihe na -agbanwe agbanwe banyere ezinụlọ ya bụ na - ndị otu ya na -enwe mmasị ikiri bọọlụ. Dị ka nwatakịrị na ọbụna ruo taa, arụsị Nuno Tavares abụwo mgbe niile Cristiano Ronaldo.
Idoro onye egwuregwu bọọlụ kacha ukwuu nke obodo ya mere ka ọ hụ egwuregwu bọọlụ n'anya.
N'oge ahụ, Nuno ga-achọ multitask n'etiti egwu na bọl. N'ihi ịhụnanya na-enweghị atụ nke ezinụlọ ya nwere maka CR7, echiche nke ịmalite ọrụ na football batara.
Ọ bụ n'oge a ka Nuno Tavares 'Mama chọpụtara ọdịnihu nwa ya nwoke.
Mmalite ezinụlọ Nuno Tavares:
Iji kwuo eziokwu, mụ na gị (mgbe ị na-ekpe ikpe site na ọdịdị ya) nwere ike ikwu - na esiteghị na nna nna ya na Portugal.
Nke a pụtara na mba Nuno Tavares nwere karịa naanị Portugal. Ọzọ, ị nọ na-eche ihe kpatara ịhụnanya ya maka CR7 ji sie ike?
Ọ dị mma, ị ga-enweta ya ezighi ezi ma ọ bụrụ na ị chere na ndị ezinụlọ Nuno Tavares ya bụ naanị ndị na-akwado akụkọ ifo.
Nke bụ eziokwu bụ na enwere mmekọrịta ya na Ronaldo - NKE Ị NA -AMARA.
Na mbụ, nne na nna Nuno Tavares si Cape Verde. Nke a (obughi Portugal) bụ ala nna ochie nke Akụkọ - CR7.
Ọ bụrụ na ịmaghị, Cape Verde bụ obodo Africa - agwaetiti dị n'etiti oke osimiri Atlantic. Site na ntinye, ọ pụtara CR7 bụ onye Africa.
Maapụ a nke Ezinụlọ Ezinụlọ Ronaldo na -enyere aka ịkọwa ebe ezinụlọ Nuno Tavares si.
Mgbe ọ na -ede Nuno Tavares Biography, Cape Verde (ebe mgbọrọgwụ ezinụlọ ya dị) na -achọsi ya ike ka ọ gbanwee mba.
N'ezie, obodo ahụ arịọla ya ka ọ bịa kpọọ ha egwu. N'ezie, nke ahụ ga -ekwe omume n'ihi na Nna na Nuno Tavares bụ Cape Verde.
Malite site na afọ anọ, nwata ahụ bidoro ịchọ ịga akwụkwọ. Maka Nuno, enwere ihe abụọ n'uche (laa azụ n'oge) mgbe ị na -aga akwụkwọ. Ka anyị kọọrọ gị gbasara ha.
Ihe abụọ a bụ mmasị ya na-enweghị atụ na egwu na football. N'adịghị ka echiche ya, ịgafe na usoro mmụta Portuguese na-abụkarị ihe kacha mkpa Maria Amélia (Nne ya).
Ndị ezinụlọ Nuno ndị ọzọ chọrọ ka ọ chee ọrụ football ihu.
Ịga ụlọ akwụkwọ football na egwu:
Ka ọ na -eto nwa na -amụ ije, Nuno Tavares Mama debara aha ya na Casa Pia. Nke a bụ ebe egwu na ebe egwuregwu dị n'obodo Lisbon.
Maria Amélia kwenyere na nwa ya nwoke, mgbe ọ nọ ebe ahụ, ga -enweta nkwado dị mkpa - akwụkwọ, nri, njem, na ohere ịmụ ihe.
N'oge ọ nọrọ na Casa Pia, Nuno so nwanne ya nwoke tọrọ ya, Edson. Laa azụ n'oge ahụ, ha na-eji bọs ma ọ bụ ụgbọ okporo ígwè eme njem.
Mgbe ya na ndị egwu Casa Pia gachara klaasị egwu, bọọlụ na-esote.
Nke a bụ Nuno Tavares n'ụlọ akwụkwọ egwu ya - ncheta ụmụaka.
Nuno Tavares Biography - Akụkọ bọọlụ:
Mgbe ọ nọ n'ebe ahụ, na Casa Pia, nwa amaala Lisbon nwere mmasị na mmasị ya abụọ; football na egwu.
Nuno Tavares kwetara na ọ ga-achụso ọrụ abụọ ahụ ma mesịa họrọ otu n'ime ha - n'ikpeazụ.
Agbanyeghị, nhọrọ mbụ (bọọlụ) atụghị onye ọ bụla anya. Agbanyeghị, nke abụọ (egwu) mere.
Nuno Tavares kwenyesiri ike na ya nwere ụzọ na egwu - kemgbe ọ sonyeere ìgwè egwu Casa Pia. Biko rịba ama: Nke a bụ otu egwu na-akpọ egwu Bombardino.
Agha dị n'etiti ịhọrọ n'etiti bọọlụ na ọrụ egwu:
Tupu ọ ghọọ afọ iri na ụma, Nuno nwetara ọrụ ka ọ mụta ụzọ egwuregwu bọọlụ Brazil. Ọ ghọrọ akụkụ nke ndị otu futsal ma mesịa bulie ya na football Casa Pia 11-a-side.
Mgbe ọ na -abịaru afọ 10 (ọkwa nke ise), nwata ahụ mere mkpebi na -awụ akpata oyi n'ahụ. Nuno Tavares (maka ihe amabeghị ihe) kpebiri na ọ ga -ahapụ akụkụ egwuregwu (football) wee gaa n'ihu na nkuzi egwu ọ hụrụ n'anya.
N'ime oge a, nwata nwoke nwere nkà lekwasịrị anya n'ịmụ Cello. Nke a bụ ụbọ akwara akpọrọ akpọrọ nke sitere na ezinụlọ violin. Ejikọtara m cello na egwu oge gboo nke Europe.
Nke a bụ otú Cello dị. Ọ bụ otu n'ime egwu egwu kacha ukwuu n'ụwa.
Ịgwakọta ịdị umeala n'obi na ịdị n'otu:
Dị ka oge niile, onye ọ bụla hụrụ Nuno dị ka nwata nwoke a na -enwe obi ụtọ nke hụrụ n'anya ime ihe masịrị ya na enyeghị ndị nkuzi egwu ya na ndị egwuregwu bọọlụ nsogbu. Nwata nwoke a na -akpa ezigbo agwa.
N'oge ahụ na Casa Pia, enwere nhọrọ nke ịhọrọ n'etiti egwuregwu (ọkachasị bọọlụ) na nka (egwu na ndị ọzọ).
Ndị a bụ akụkụ abụọ kachasị ike nke ụlọ ọrụ ahụ. N'agbanyeghị ịgbanye egwu, Nuno ka nyere bọọlụ oghe aka.
Nuno Tavares Biography - Njem a ma ama:
N'oge niile ọ bụ nwata, ọ ka bụ nwata a dị nwayọ ma na -arụsi ọrụ ike - onye gosipụtara ike multitask - jikọta egwu na bọọlụ.
N'ịchọpụta na ịbụ bọọlụ bụ ihe na -apụ n'anya, nne na nna Nuno Tavares kwenyesiri ike na nwa ha nwoke ma ọ dịkarịa ala nye ya nraranye karịa - karịa egwu. Site na ntinye, ọ pụtara inye ezumike ọrụ na nkuzi egwu.
Mkpebi a bịara n'oge Nuno dọtara uche nke Sporting CP Youth Academy. Ọ kpaliri mmasị Sporting n'ihi na ọ nọ n'etiti ndị egwuregwu bọọlụ ntorobịa kacha mma na Casa Pia.
Akụkọ Nuno Tavares Sporting CP:
Onye na -eto eto sonyeere Sporting CP maka ihe abụọ. Nke mbụ bụ n'ihi na nne na nna ya (ọkachasị nne ya) kwadoro ya.
Nke abụọ bụ n'ihi na klọb ahụ welitere arụsị ya (CR7). Maka ihe ndị a, o siri ike ezinụlọ Nuno Tavares iguzogide onyinye ha.
Nuno sonyeere ụlọ akwụkwọ Sporting CP n'afọ 2010. N'ụlọ ọgbakọ, onye dị afọ iri na-egwuri egwu Rafael Leao onye bụbu kpakpando kachasị na agụmakwụkwọ.
Nuno Tavares bụ nwa nke anọ site n'aka nri, ebe Rafael Leao bụ nwa nke ise site n'aka ekpe.
Ntinye uche zuru oke na football na-enweghị ohere ịga klas egwu bụ n'ezie ọgwụ siri ike ilo.
Iji nagide ya, Nuno chepụtara ụzọ. Otu n'ime ndị otu ya na Sporting na-echeta ịhụnanya nwa nwoke ọzọ (Cello). N'okwu ya;
Ọ na -agakarị ọzụzụ, ka na -ebu cello, nke na -abụghị ngwa ọkụ.
Asọmpi mbụ Nuno gbara na Sporting bụ Mundialito. N'ime ụbọchị egwuregwu asọmpi, ọ ga -ebute ngwa egwu ya n'azụ wee gwuo egwu maka ndị otu ya.
Ọ dịghị mgbe Nuno na -eme ihere iburu ngwá ọrụ dị arọ. Ọ dịghị mgbe o zochiri eziokwu na ọ na -enwe mmasị igwu egwu cello. N'ezie, onye ọ bụla n'ime ndị otu egwuregwu ya maara banyere agụụ egwu ya.
N'agbanyeghị iburu Cello ya na ọzụzụ, Nuno (gị onye egwuregwu bọọlụ) agbadaghị arụmọrụ ya maka klọb ahụ.
Nlaghachi Casa Pia:
Dị ka onye na -agba ama egwuregwu, Tavares nọrọ ụlọ akwụkwọ Sporting CP nọrọ oge atọ siri ike. O siri ike n'ihi na nwata nwoke ahụ chọpụtara na ọ naghị eto na agụmakwụkwọ egwu ọ hụrụ n'anya.
N'ụzọ dị ịtụnanya, Nuno Tavares Mama (Maria Amélia) mere ya ka ọ pụọ na Sporting - maka na ọ chọrọ otu ebe maka egwu na bọọlụ.
Dị ka ebe nrụọrụ weebụ Portuguese Record si kwuo, nne na nna Nuno Tavares (kpọmkwem mama ya) bụ ezigbo onye na-akpali akpali (na ezinụlọ Tavares) chọrọ ka ọ laghachi na Casa Pia.
Nke a bụ ụlọ ọrụ ebe nwa ya nwoke kwadoro ihe omume abụọ ahụ.
Ruo afọ abụọ, Nuno nọrọ na Casa Pia (mgbe ọ lọtara). Mgbe ọ nọ ebe ahụ, nwata ahụ tozuru oke ka ọ na -ama aka ọrụ abụọ ya (egwu na ịgba bọl).
Nnyocha nwere ya - na ọ gbara bọọlụ nke ọma, jiri aka ekpe ya na aka nri ya, wee nwee ọtụtụ ihe mgbaru ọsọ.
Na 15, ntozu Nuno nwere ike ime ka ọ họrọ ntụzịaka nke ya. Site na obere ndụmọdụ sitere n'aka ndị otu ezinụlọ, o kpebiri na ya ga -ewere bọọlụ dị ka ọrụ ma debe egwu dị ka nnukwu ihe ntụrụndụ ya.
Nuno Tavares Biography - Akụkọ ịga nke ọma:
N'agbanyeghị nke ahụ, mgbe ọ dị afọ 15, kpakpando na -ebili - onye nwetagoro ahụ ike na nkwuwa okwu na nku ghọrọ ihe nnyefe dị ọkụ maka ụlọ akwụkwọ mmuta ya - Casa Pia.
N'afọ ahụ 2015, ndị nnọchi anya Benfica Academy zutere nne na nna Nuno Tavares - iji mee ka ha kwenye inwe nwa ha nwoke n'ime otu ha.
N'ikpeazụ, ọ bụ Benfica mere nke ọma gbalitere ahụhụ bọọlụ na Nuno. Mgbe ọ bịanyere aka n'akwụkwọ nkwekọrịta klọb ahụ, Nuno na -eto eto kwere nkwa inye ihe niile o nwere na football. N'ezie, nkwa 100%.
Nke a bụ Nuno, afọ 15, n'oge ọ bịanyere aka na mahadum Benfica.
Ogologo ichere ahụ mechara kwụsị. Tavares so ndị otu Benfica mere ọkachamara ọkachamara na 4th nke August 2019.
Ọ bụ n'ezie mmalite mara mma ka ọ (otu izu gachara) gbara ihe mgbaru ọsọ mbụ ya wee nye aka na ebumnuche nke ndị ọkpọ - Haris Seferovic na Darwin Nunez.
Nuno mere mmalite dị egwu dị ka onye egwuregwu ịgba ọsọ ọkachamara.
Oge 2020-21 bịara nke ọma karịa ka Tavares mere ngosipụta 41 dị elu-yana nnukwu enyemaka na mmekorita nchekwa-yana ihe ndị ọzọ. Jan Vertonghen.
Na mbido ọpụpụ nke Nelson Semedo, ọ ghọrọ nhọrọ ndabere kacha mma maka Alex Grimaldo.
Mmechuihu ghọrọ ngọzi:
N'ụbọchị kwesịrị ntụkwasị obi, azụ aka ekpe-Nuno Tavares-na-awụ akpata oyi n'ahụ hụrụ onwe ya n'okpuru ntụle ịdọ aka na ntị Benfica. Nke a bịara n'ihi arụmụka bilitere n'okwu ya - n'ajụjụ ọnụ a gbara na soshal midia.
Na vidiyo na-ese okwu, enyi Nuno rịọrọ ka ọpụpụ nke onye na-asọ mpi aka ekpe na onye otu ya-Glex Grimaldo-ka o wee nweta oge egwuregwu.
Nuno-onye na-anaghị enwe ọ ofụ nke ukwuu n'egwuregwu bọọlụ nke mbụ-zara ya na nkwupụta ndị a-nke na-ekwu maka ọdịnihu ya. Ọ sịrị;
Ọ bụrụ na ọ bụghị na Benfica, ọ bụ ebe ọzọ.
Ụfọdụ ndị na -akwado Benfica weere nke ahụ dị ka mkparị klọb ya. Ndị ọzọ kwuru na ọ kparịrị Grimaldo.
N'ịgbaso nkwupụta ya, Nuno matara mmejọ ya. Ọ na -eme ngwa ịrịọ mgbaghara ndị na -akwado Benfica na njikwa ya - maka "omume enweghị uche" ya. N'okwu ya;
Nke a bụ Nuno Tavares 'Mgbaghara maka klọb ya na ndị enyi ya.
N'echeghị echiche, abanyela m na vidiyo na -agagharị ugbu a na mgbasa ozi mmekọrịta.
Ọ naghị egosipụta ihe m na -eche maka Benfica na ndị otu m.
Ọ na -ewute m na akụkụ na nha nke nkwupụta nkeonwe ndị a nwere,
Ọzọkwa, achọrọ m ịkọwa na ọ dịghị mgbe ebumnuche m pụtara ịkwanyere klọb nke nyeere m aka itolite ma bụrụ onye m bụ.
Maka ndị egwuregwu Benfica niile, a na m arịọ mgbaghara. Ana m ekwe nkwa na vidiyo a na -eme n'ihu ọha anaghị ekwupụta mmetụta m na ihe m chere maka klọb m hụrụ n'anya.
N'ịgbaghara mgbaghara, ọ ghọrọ asịrị na Benfica mere ịdọ aka na ntị megide ya. Otu n'ime ha bụ echiche ka e ree ya.
Arsenal zuru ya:
N'ịga n'ihu mgbe esemokwu ahụ gasịrị, Nuno nwere otu ihe n'uche. Ọ kwadoro maka ihe kacha njọ, ebe ọ maara na ọ ghọwo onye Benfica a chụpụrụ achụpụ.
Mgbe ha hụrụ ọgba aghara ahụ, Arsenal na Napoli abanyela na esemokwu iji banye na nwata ahụ.
Na -enweghị nloghachi nke Kolasinac kwuru, Gunners chọrọ asọmpi maka Kieran Tierney. N'ụbọchị iri nke Julaị 10, klọb North London kwupụtara Nuno Tavares bịanyere aka n'akwụkwọ - na nkwekọrịta ruru nde £ 8.
N'oge edere Nuno Tavares Biography, Nuno n'akụkụ Albert Sambi Lokonga nwere oke obi ụtọ maka igwu egwu na Premier League.
Obi abụọ adịghị ya, arụmọrụ Tavares na Benfica (lee vidiyo dị n'okpuru ebe a) emeela ka ọ bụrụ ihe kwesịrị ekwesị.
N'ezie m na -ekwu, ọ bụ naanị obere oge tupu Benfica amata na ha emeela nnukwu mperi ka ha ree ya na ọnụ ala. Ndị ọzọ, dị ka anyị na -ekwu, nke Nuno Tavares Biography, bụ akụkọ ugbu a.
Nuno Tavares Ndụ Ndụ - Nwanyị nwanyị, Nwunye, Nwa?
Ịchụso ọrụ na football na egwu siri ike. Maka Nuno, ihe kacha mkpa bụ mmezu ya n'ime.
Ugbu a o mere ya na egwuregwu mara mma, ọ bụ ihe na-emekarị ka ndị Fans na-ajụ ajụjụ banyere njirimara enyi ya nwanyị ma ọ bụ nwunye ya ga-abụ.
Onye na -eme Nuno Tavares mkpakọrịta nwoke na nwaanyị? Ọ nwere enyi nwanyị ma ọ bụ nwunye?
Tupu ọ malite ọrụ ya na Arsenal, anyị kpebiri itufu ụgbụ anyị na World Wide Web iji mara njirimara nwanyị ọ weere dị ka enyi nwanyị ma ọ bụ nne nwa ya.
N'ọnwa Ọgọst 2021, amabeghị njirimara Nuno Tavares 'Nwanyị nwanyị na adịghị ya na ngalaba ọha.
Eleghi anya, ezinụlọ Nuno Tavares dụrụ ọdụ ka ọ nọrọ n'alụghị nwanyị - ọkachasị n'oge a dị oke mkpa nke ọrụ ya.
Nuno Tavares Ndụ Nkeonwe:
Ewezuga bọọlụ niile, gịnị ka nwoke Arsenal na -eme n'oge nke ya? Ọ dị mma, ikpe site na akụkọ ndụ anyị ruo ugbu a, anyị chere na echiche gị nwere ike ịdị mma.
Nuno na -arara Cello ọ hụrụ n'anya kacha mma n'oge ya. Ugbu a, ebe a bụ otu ihe ngosi vidiyo. Nuno rụrụ otu oge maka ụfọdụ ndị na -ege Benfica - mgbe ọ nọ n'akwụkwọ ọma ha.
Ọzọkwa, na ndetu nkeonwe, Nuno bụ nwoke dị nwayọ na ala. Ọ bụ nwoke dị umeala n'obi nke na -ekwukarị ihe na -adịghị mkpa ma nwee mmasị ka ya na mmadụ niile dịrị.
Ndụ Nuno Tavares:
Otu ihe doro anya, Baller abụghị ụdị nke na-ekwu okwu afọ ojuju gbasara akụ na ụba ya. Ndụ Nuno Tavares enweghị ndụ pụrụ iche na nke a pụtara ìhè n'ile ya dị mfe.
Nuno Tavares na -ebi ụdị ndụ dị mfe.
Ọ bụrụ na enweghị bọl ma ọ bụ egwu, ị nwere ike ịhụ ya n'ụlọ ezinụlọ ya - na -eme ihe ọ kacha mma. Ọ bụghị ihe ọzọ karịa egwuregwu vidiyo.
Dị ka Hector Bellerin, Tavares bụ nnukwu onye na -akwado Playstation. Anyị ji n'aka na ọ zụtala ihe njikwa ọzọ-Gen-PlayStation 5.
Nuno hụrụ Playstation n'anya. Site na anya onye njikwa, nke a bụ Playstation 4.
Ọzọkwa na Nuno's Web, ịnọkwu n'ụlọ na -egosi inwe ezigbo enyi ya. Ha bụ Nkịta ya. Ndị egwuregwu bọọlụ nwere echiche na nkịta ọ bụla mara mma, n'agbanyeghị ụdị ya.
Anyị na -achọpụtakwa na Nuno nwere mmasị ịnwe nkịta ya n'akụkụ ya mgbe ọ bụla ọ na -egwu PlayStation ya (lee foto dị n'elu) ma ọ bụ Piano. Nke a bụ mpempe akaebe vidiyo.
Ndụ ezinụlọ Nuno Tavares:
N'ime ederede Bio a, anyị ghọtara na ndị mụrụ ya (karịsịa mama ya) agbasi mbọ ike ịhụ ka ọ na-aga nke ọma.
Taa, ya na ndị ezinụlọ Tavares ndị ọzọ na-aghọrọ mkpụrụ nke ịrụsi ọrụ ike nwa nwoke ahụ.
Nna Nuno Tavares:
Ọ bụ ezie na obere akwụkwọ dị na ya, anyị ji n'aka na ya na Maria Amélia (nwunye ya na mama Nuno) ha abụọ sitere na agwaetiti Africa nke Cape Verde.
N'adịghị ka Nuno Tavares 'Mum, nna ya nwere obere akwụkwọ ndekọ na nzụlite ya na football.
Enwere obere onyinye ma ọ bụ adịghị adị n'akụkụ ya. Naanị eleghị anya, ndị nne na nna Nuno Tavares nwere ike kewapụ ma ọ bụ gbaa alụkwaghịm. Mkpebi niile achọpụtara sitere na mama ya.
Nne Nuno Tavares:
Maria Amélia dị ka a na -akpọkarị ya, pụtara ihe niile maka nwa ya nwoke na nwanne ya nwoke. Ọ rụọla ọrụ dị mkpa n'ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ akụkụ niile nke ndụ Nuno ya - malite na mgbe ọ bụ nwata ruo ugbu a.
Na-enweghị Maria Amélia, Nuno agaraghị enweta nkasi obi n'ọgụ ya n'etiti ịhọrọ ntụziaka ọrụ ziri ezi.
Maria Amélia mere mkpebi ndị siri ike nke mere ka nwa ya nwoke na-azụ ahịa abụọ (bọọlụ na egwu).
Nwanna Nuno Tavares:
Dabere na webụsaịtị Portuguese (Ndekọ), aha ya bụ Edson Tavares. Ọ dị ka ọ bụ naanị nwanne Nuno Tavares - onye na -akpa afọ ezinụlọ ya. Enweghị nnyocha dị ma ma ọ bụ onye egwuregwu bọọlụ.
Nuno Tavares ikwu:
Otu ihe doro anya, eziokwu ahụ bụ na onye egwuregwu bọọlụ Arsenal agbatịkwuru ndị ezinaụlọ ya bụ mgbọrọgwụ ya - site na Cape Verde na obodo amụrụ ya - Portugal.
N'ikwu okwu banyere ịmata onye ikwu Nuno, anyị hụrụ nwoke a ya na ya na-eketa otu aha ezinụlọ ya.
Aha ya bụ David Tavares - (akpọrọ Rasta Tavares). N'ụzọ dị ịtụnanya, ọ na-egwu Benfica - n'oge edere Bio a.
A mụrụ David Tavares na Portugal na ọ bụ onye Cape Verdean - ụlọ mbụ nke ezinụlọ Nuno Tavares.
N'ụzọ na-akpali mmasị karị, a zụlitere ya na Lisbon (dị ka Nuno) na ọ bụ onye gụsịrị akwụkwọ na Benfica cademy. Dave ọ bụ akụkụ nke ezinụlọ Nuno Tavares?
Nuno Tavares dị ka ya na David Tavares (n'etiti) na enyi ọzọ nọ na nri abalị.
Nuno Tavares Eziokwu efu:
N'ịbụ onye soro gị mee njem n'akụkọ ihe mere eme nke ndụ ya niile, Lifebogger ga-eji ngalaba mmechi a kpughee eziokwu ndị ọzọ gbasara Nuno.
Ka anyị jiri ihe dị ka ihe ntụrụndụ zoro ezo nke ndị egwuregwu bọọlụ Portuguese.
Eziokwu nke 1 - Onye na -akwado bọọlụ:
Mgbe ya na David Tavares na-akpakọrịta, Nuno mere ka ndị Fans nwee mmetụta - na ọ bụ onye NBA.
N'ikpe ikpe site na wears ya, ọ dị ka onye na-akwado Boston Celtics. Kedu onye maara?... eleghi anya nwata nwoke mara ka esi agba bọọlụ.
Ndị egwuregwu bọọlụ basketball abụọ a ọ bụ?
Mgbe o kwetara ịhapụ Benfica, onye isi otu Arsenal bụ Edu kwere nkwa ụgwọ ọnwa Nuno Tavares okpukpu atọ. Nnyocha emeela ka Nuno jiri Benfica mee ihe ruru kilogram 35,000 kwa izu (stats 2021).
Ugbu a, nke a bụ mmebi nke ụgwọ ọnwa Nuno Tavares Arsenal - mgbe agbanwere ya site na Pound sterling gaa Cape Verde escudo. Ọ na -agwa gị otu o si baa ọgaranya. IHE: Cape Verde bụ ụlọ nne na nna ya na ndị ikwu ya.
Nuno Tavares kwụrụ ụgwọ na Cape Verde escudo (CVE)
Ihe ọ na -eme kwa afọ: 4,517,245 CVE
Ihe ọ na -eme kwa ọnwa: 376,437 CVE
Ihe ọ na -eme kwa izu: 86,736 CVE
Ihe ọ na -eme kwa ụbọchị: 12,390 CVE
Ihe ọ na -eme kwa elekere: 516 CVE
Ihe ọ na -eme kwa nkeji ọ bụla: 8.6 CVE
Ihe ọ na -eme kwa nke abụọ: 0.14 CVE
Nke kacha masị anyị, anyị nyochara ndakpọ ụgwọ ọnwa Nuno Tavares (na ego Cape Verde) ka elekere na -akụ.
Kemgbe ị malitere ilele Nuno Tavares'Bio, nke a bụ ihe ọ rụpụtara na Arsenal.
Eziokwu # 3 - Nkọwapụta Football:
Nuno Tavares kachasị nke ọma ma a bịa na mmegharị ya - ekele niile maka ọsọ ya 85 na osooso nke 87. Ọ na -enwukwa na mpaghara ike, nka, ịgbachitere na echiche.
N'agbanyeghị stats ndị a dị ịtụnanya, ọtụtụ ndị egwu Arsenal chere na ọ nweghị ike ịsọ mpi Cedric Soares (onye a na -etinye n'ọrụ mgbe ụfọdụ na nku aka ekpe).
Ọfọn, oge 2021-2022 ga-agwa. Dị ka Ivan Tony, Nuno nwere ọrụ nrịba ama nke igosi na ndị nkatọ ya ezighi ezi.
Eziokwu nke 4 - Okpukpe Nuno Tavares:
Dị ka anyị pụrụ isi kwuo ya, nwa Maria Amélia kweere na ịdị adị nke ihe karịrị ike mmadụ nke a na-akpọ Chineke.
Ọzọkwa, ọgbaghara anyị na-akwado Nuno bụ nke okpukpe Ndị Kraịst. Ọ na-esonye na 86% nke Portuguese bụ ndị Kraịst.
Tebụl a na -ekpughe ozi dị nkenke gbasara Nuno Tavares. Ịgafe na ya ga -enyere gị aka ịghọta profaịlụ ya.
Aha n'uju: Nuno Albertino Varela Tavares
aha otutu: Onye na-agba ọsọ Lode
Ụbọchị ọmụmụ: 26 January 2000
Afọ zuru oke: Afọ 22 na ọnwa 0
Ndị nne na nna: Maria Amélia (Nne), a maghị papa m
Ụmụnne: Edson Tavares (Nwanna)
Ezinụlọ Ezinụlọ: Cape Verde
Obodo/Ịmụ amaala: Portugal na Cape Verde
Education: Casa pịa
Ihe omume: Egwu, Bọọlụ na Bọọlụ Nkata
Ogo (ụkwụ na mita): 6 ụkwụ 0 sentimita na 1.83 mita.
Net Net (2021): Nde Euro 1.5
Onye nnọchite anya: Ndị na -ere ọkụ
Egwuregwu Ọnọdụ: N'aka ekpe
N'ịbụ onye tolitere na Talaíde, Nuno anọghị na okomoko nke ndụ - dịka ọtụtụ ezinụlọ nọ n'ógbè ahụ. Nye nwa okorobịa ahụ, ihe atọ kacha mkpa.
Nke mbụ bụ ịhụnanya nne ya (Maria Amélia). Nke abụọ bụ ịhụnanya maka Cello. Nke atọ, bụ ịhụnanya ya maka football.
Site na nwata dị afọ anọ, etinyere Nuno n'ime ụwa iji chọpụta ụzọ nke ga -eduga n'ọdịdị ya. Ugboro ugboro, ọ na -eche ma ọ ga -anwale ọrụ egwu wee hapụ ịgba bọọlụ.
N'ihi mkpebi nne ya na-ahụ n'anya (Maria Amélia), ịgba bọọlụ butere egwu ụzọ-ebe edebere nke abụọ dịka akụkụ dị mkpa nke agwa ya. Ruo taa, Nuno nwere ike iji obi ụtọ mee ihe abụọ a.
Site n'obi eziokwu, anyị na-ekele gị maka ịhụ akụkọ ndụ anyị n'anya.
Mgbe ha na-ebuga akụkọ ndụ Ndị na-agba bọọlụ Portuguese, anyị na -eburu n'uche mgbe niile izi ezi nke ihe ncheta anyị. Biko kpọtụrụ anyị (site na nkọwa ma ọ bụ kọntaktị) ma ọ bụrụ na ịhụ ihe na -adịghị mma.